Njirimara bara uru na ime ihe na-eme ka ugu sie - Ugu - 2019
Njirimara ọgwụ nke ugu, ihe eji eme ihe na-adabere na ugu na nkà mmụta ọgwụ nke oge a
Gịnị mere ogwu ji aba uru?
Njirimara bara uru nke osisi
Gịnị mere pumpkin pulp bara uru?
Uru nke ịṅụ mmanya ọṅụṅụ
Enwere m ike iji ugu ime ime
Otu esi choputa ugu
Ugu: nsogbu na contraindications
Ugu: mejupụtara ọgwụ chemical na uru bara uru
Ugu - kwa afọ ma ọ bụ osisi perennial nke gọọmentị melons. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ugu adịghị edozi ahụ, ọ na-eguzogide ọgwụ ọjọọ, ọrịa na pests, ọ na-etolite n'ubi ọ bụla ma na-enye nnukwu ihe ọkụkụ, osisi ahụ bụ ụlọ nkwakọba ihe nke ihe bara uru.
Mkpụrụ osisi na-esi nri nwere ihe dị otú ahụ bara uru:
Ị ma? Ugu enweghi cholesterol mgbe nile, oke mmanu kwa 100 g nke ihe a bu nani 0, 1 g. Ya mere, nkpuru nke osisi abughi nani nani otutu ihe ndi ozo bara uru, kamakwa n'ihi na o bu ihe ndi na-eri obere kalori. 100 g mkpụrụ nwere 22 Kcal, nke nanị 0.9 Kcal bụ abụba.
Mkpụrụ nke osisi nwere ọgaranya vitamin mgbagwoju:
N'ihe bara uru nke vitamin bara uru, ihe ọma a na-emetụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ nile na ọrụ nile nke anụ ahụ: ọhụụ, nnweta, usoro ụjọ, ahụhụ ọbara, imeju, afo, eriri afọ, akpụkpọ anụ, ịkọ ọbara, mgbaze. Ka a sịkwa ihe mere ugu ji bụrụ ọgwụ nje.
Nri bara uru nke 100 g nke ngwaahịa:
calories - 22 Kcal;
mmiri - 91, 8 g;
eriri nri - 2 g;
ndi na - edozi - 1 g;
abụba - 0. 1 afọ
A ghaghi itinye ogwu na nri nke dietetics, dika, na aka nke ya, nwere oke abuba, na nke ozo, o ga-eji aru vitamin mejuputa aru ya, mee ka usoro ahu nwere ike ghara idi.
Ọ dị mkpa! Ihe mgbagwoju anya nke ihe di iche iche na vitamin nwere okpokoro ugu. Umu ahihia na nri fodder nwere ihe di iche iche nke ihe omimi di iche iche ma ghara inwe ihe ndi ogwu.
Ugu na-etinye uche kpam kpam site na ahụ. Usoro nke ichikota ngwaahịa a bu ihe dika awa abuo. Nabatara eriri afọ na usoro urinary. Ugu anaghị enwe ihe ọ bụla na-emerụ ahụ, ọ naghị ejiri ụcha na-egbu ahụ. N'ụzọ megidere nke ahụ, otu n'ime ihe ndị na-aba uru nke ugbo bụ na ọ na-akwalite nkwụsị salts na toxins.
Eto ugbo na-eto eto na-aga nke ọma na ihe niile. A naghị atụ aro mkpụrụ osisi na anụ, mkpụrụ osisi, kọlịflawa, pea.
Ngwurugwu ọgwụ nke ugu maka aru mmadu na-eji ya eme ihe n'uzo omenala na omenala. Na pharmacies ị nwere ike ịhụ ọtụtụ ọgwụ ndị dabeere na ugu, n'etiti ha:
Mkpụrụ mmanụ mkpụrụ vaịn;
Ndị ọgwụ ndị a nwere ọgwụ mgbochi, antibacterial, ịba ogwu, mmetụta diuretic. A na-eji ha maka prostatitis, ọrịa urogenital, nsụpọ eriri afọ, imeju. A na-ejikwa mmanụ mkpụrụ pọju na-arụ ọrụ ma na-eweghachi ihe anya.
Tụkwasị na nke ahụ, enwere nnukwu ihe oriri na-edozi ahụ na-adabere na ugu, bụ nke a na-eji dịka nkedo, maka igbochi ọrịa ndị na-adịghị mma.
Ọ dị mkpa! Ụdị ụdị nri na-emekarị ka ugu bụ pumpkin porridge na mmiri ara ehi. Otú ọ dị, ugu adịghị mma na mmiri ara ehi na mkpụrụ osisi. Ya mere, ihe ndị dị otú ahụ, dịka echiche siri ike banyere uru ya, anụ ahụ na-etinyeghị ya n'ahụ, arọ na afo, na mmiri ara ehi na-egbochi nsị nke ugu na uru ya bara uru site na ahụ.
A na-eji ọgwụ na-agwọ ọrịa eme ihe na-agwọ ọrịa nke ugu. Na ndabere ya, decoctions, juices, cereals, ointments dị njikere. Akwukwo ugu ndi ozo bu ihe bara uru, nke i kwesiri idozi - ma ọgwụ di njikere maka otutu oria.
N'ihi ọdịnaya nke nnukwu ihe bara uru na akụkụ vitamin, ugu nwere ọtụtụ uru bara uru. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'àgwà ndị nwere ugbo, ebe a bụ ndepụta nke isi:
enyere aka meziwanye ọbara;
na-ewusi mgbidi na mgbochi nke obi;
mee ka anya dị mma;
eme ka usoro ọbara dịrị;
enyere aka wepu ikpuru;
meziwanye ihe onwunwe;
Mmetụta bara uru na akpụkpọ ahụ.
Na ajụjụ ma ma ọ bụ ugu bụ diuretic, azịza doro anya bụ ee. Ngwa a bụ otu n'ime ndị isi ise n'ime akwụkwọ nri ndị a. Nke a na-akọwa site na nnukwu ọdịnaya nke calcium, magnesium, na potassium na mkpụrụ osisi.
Ugu nwere ike sie ya, kpochapu ya ma sie ya. Mgbe frying, ugu efunahụ ọtụtụ n'ime àgwà ya bara uru. Ma ihe ọṅụṅụ nke ugu bu ihe bara ezigbo uru nke vitamin na ihe di mkpa maka mmadu.
Ugu osisi nwere ọgaranya na zinc. Nke a na-akọwa ọtụtụ n'ime ihe ngwọta nke ugu osisi. Na mgbakwunye, ha na-ejupụta na protein, vitamin A, B, C, E, D, K, ígwè, calcium, potassium, magnesium, phosphorus, amino acids and acid fatty acids.
Akwadoro maka ojiji nke ndị anaghị eri anụ na ndị na-eri ihe, ka ha na-edozi nri ndị dị na anụ na àkwá.
Ugu osisi nwere ụdị ọgwụgwọ ndị a:
ike mbọ, ntutu;
gbochie akọrọ akpụkpọ na wrinkles;
na-emezi ihe na-eme ka ihe ndị na-akpata ọgwụ ọjọọ eme ihe;
nye aka melite ọrụ spam;
melite arụmọrụ nke àkwá;
akwalite ịdị ọcha nke arịa ọbara;
mee ka excretion nke cholesterol megharia site na aru;
nwere mmetụta dị ala na constipation;
mee ka obi dị jụụ mgbe ị na-arịa ọrịa na ọrịa na-agagharị agagharị;
A na-elebara anya nke ọma maka ike nke ugu osisi iji wepụ ikpuru anụ ahụ n'ụzọ dị irè. Maka mbibi nke nje ndị na-eji ugu eme ihe, a na-eji osisi ya eme ihe n'izu, 100 g na afo efu na ụtụtụ, na obere mmiri. Mgbuo osisi bụ ezigbo ọgwụgwọ agwọ ọrịa. Iji mee nke a, a na-atụ ha na mgbochi ma ọ bụ na-egbu nri, na-agbasa n'ime cheesecloth ma tinye aka na ọnya ahụ.
A na-eji ugwo osisi eme ihe na ọgwụgwọ prostatitis. N'ebe a, Prostoror na Prostamed maara nke ọma - ụdị mkpụrụ osisi pumpkin nke na-enyere aka imeri prostatitis ma melite ike.
N'agbanyeghi nmetuta di iche iche nke oria mmuta, ugu pulp na nkpuru ya nwere ihe ndi ozo iji jiri, nke gunyere:
nnukwu ọnya afọ ma ọ bụ ọnyá afọ;
na otutu acidity nke ihe ọṅụṅụ nke afo;
arịa ọrịa shuga.
Ọ dị mkpa! Osisi ndị kasị baa uru bụ ndị a na-emeghị na ya. A na-atụ aro ka ha kpoo ụbọchị ole na ole n'ime anyanwụ ma kpochapụ ya ozugbo tupu iji ya.
A na-eri anụ ahụ na-esi ísì ụtọ, dị ka ọka, sie, stewed. A naghị atụ aro maka nsị n'ihi na ngwaahịa ahụ efunahụ ọtụtụ ihe bara uru. Ihe bara uru nke pulp gụnyere:
ime mgbanwe cholesterol;
akwalite ọgwụgwọ ọrịa ọnya afọ;
nwere nnukwu folic acid;
ejiri ígwè mejuo ya ma nwee mmetuta bara uru n'inwe mkpụrụ ndụ ọbara;
enyere aka ikpochapụ toxins si n'ahụ.
Tụkwasị na nke ahụ, ihe ngwọta nke ugu maka imeju dị ezigbo ọnụ. Pọp nke nwa ebu n'afọ na-akwalite iwepụ ihe ndị na-egbu egbu ma na-egbu egbu n'ime imeju. A na-ejikwa ogwu pulp mee ihe maka ire ọkụ, eczema, dermatitis, dị ka onye na-agwọ agwọ ọrịa.
Ị ma? Pumpkin pulp nwere mmetụta bara uru na nkwonkwo. A na-eji pulp apịpịa a na-egbuke egbuke na ntụpọ ahụ, na mgbe obere oge, onye ahụ ga-enwe mmetụta dị oke mkpa.
Mmiri ihe na-esi ísì ụtọ bụ ezigbo ezigbo mmanụ bara uru, ọ bụ naanị ya nwere ike ịchọrọ ya. A na - eme ka ihe ọṅụṅụ na - amị mkpụrụ dị na pectin, ígwè, magnesium, calcium, potassium, beta-carotene, vitamin B, C, E. Ngwaahịa a na - ewusi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ma nwee mmetụta bara uru n'ahụ akụkụ niile.
Mmiri ihe ọṅụṅụ nwere ihe ndị na-esonụ na-agwọ ọrịa:
ewusi mbọ na ntutu;
ọhụụ dị mma;
ehichaa gallbladder na imeju nke toxins;
eme ka ọbara na-ekesa.
Ọ dị mkpa! Ihe ọṅụṅụ na-esi nri nwere ike diuretic siri ike. Ndị nwere nnukwu nkume na akụrụ ma ọ bụ eriri afo kwesịrị iji ngwaahịa a jiri nlezianya na naanị mgbe ha jụsịrị dọkịta. Ebe ọ bụ na njem nke nnukwu nkume n'okpuru nduzi nke diuretic pụrụ iduga nchịkọta nke ụzọ urinary ma ọ bụ choleretic.
N'ihi nnukwu ọdịnaya nke vitamin na ihe ndị bara uru, ugu nwere ọtụtụ ọgwụ na-eme ihe, ọ na-ejikwa ya na omenala dịka omenala, cosmetology.
A na-atụ aro iji ugu na ọgwụgwọ maka ọrịa dị otú ahụ:
na cystitis, nephritis, pyelonephritis;
obi ụtọ na colitis;
mee ka mgbaze na usoro metabolic dị na ọrịa nke akụkụ eriri afọ;
n'ihi na ehighi ura;
dị ka nkwụsị maka ịda mbà n'obi;
na ọbara mgbali na ọrịa obi;
flu, nnukwu ntiwapụ nke nje respiratory dị ka ihe mgbochi mkpali na ike mgbochi;
na enweghi ihe anya;
maka igbochi kansa;
nwere ọrịa imeju;
ọrịa ndị na-afụ ụfụ.
N'okpuru ihe omimi, e ji ugu merie oria di otua:
ihe na-afụ ụfụ;
Ị ma? E gosipụtawo na sayensị gosiri na ugbo osisi na-akwado ọrụ mmekọahụ na ụmụ nwoke ma na-eme ka ụba na ike.
Ugu maka ndi di ime bara uru. Mbụ, ọ na-akwalite nwepụ nke toxins na cholesterol, nke na-eme ka ndị nne na-atụ anya na-eme ngwa ngwa. Ihe ọṅụṅụ na-esi nri na-enyere aka na afọ ntachi na eriri afọ. Tụkwasị na nke a, a na-emepụta ngwaahịa a na folic acid, nke dị mkpa maka ịzụlite nwa ebu n'afọ dị mma.
Ihe ọṅụṅụ na-esi ísì ụtọ na pulp na-ewusi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, bụ nke dị oké mkpa maka ahụike nke nwanyị dị ime. Nke a bụ ihe ngwọta dị mma maka edema, mbufụt nke akụrụ na eriri afo. Ugu ga - azoputa nne di n'ihu site na mgbu na-egbu mgbu n'oge oria ojoo, njigide.
Ọ dị mkpa! Ụfọdụ ndị inyom dị ime nwere ike ịbụ carotene, nke bara ọgaranya na ugu. Ọ bụrụ na ị nwere mmeghachi ahụ nfụkasị (itching, ọkụ ọkụ, iwe iwe) kwesịrị ịjụ ịnata ngwaahịa ahụ. A gaghị eji mkpụrụ osisi ugu mee ihe n'ọnọdụ ụbụrụ.
Akwukwo ugu nwere ugbo ogwu. Mkpụrụ ya dị nha n'ogologo, nweekwa odo odo na agba. Iji họrọ ezigbo ugu, ị ga-agbaso ndụmọdụ ndị a:
họrọ obere mkpụrụ (ruo n'arọ 5), ọ ga-atọ ụtọ ma baa uru;
mkpụrụ osisi na-acha mkpụrụ osisi nwere ọdụdụ akpọnwụ, akpụkpọ anụ nwere ọdịdị anya doro anya;
na n'elu ekwesịghị ịbụ stains, dents na mmebi ọzọ;
nke na-esi ísì ụtọ nke pọmpụ ahụ, otú ahụ ka ọ bara uru karị;
Ejila ịzụta ihe ndị ị ga-egbutu, rịọ ka ị belata oke nha nke kwesịrị ekwesị na gị.
Ị ma? Mgbe ị na-azụ otu mpekere sliced, jide n'aka na ị ga-anwale mkpụrụ - ọ ga-abụ mfri eke, buru ibu, na-enweghị ihe na-etinye ya. Ọkụ ahụ kwesịrị ịbụ fibrous. Ụdị njirimara ndị a na-egosi na e bipụla ibe ahụ site na mkpụrụ osisi, mkpụrụ ọma.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ugu nwere ọtụtụ nri na vitamin, bụ ihe oriri na-eri nri, e nwere ọtụtụ ihe na-egosi na ọ na-eji ya eme ihe. Ndị a na-agụnye nkwenye na ụfọdụ ọrịa.
Ndepụta ndị e depụtara na ọrịa ndị a agaghị eri ugu:
mụbara acidity nke ihe ọṅụṅụ nke gastric.
Tụkwasị na nke ahụ, ị ​​gaghị eri ihe dị ukwuu nke ngwaahịa ahụ, n'ihi na nke a nwere ike iduga na mmiri agwụ, ọrịa nke eriri afọ, nkwụsị na-adịghị ahụ ọkụ.
Ya mere, ugu bu ihe bara uru nke vitamin na ihe oriri, nwere otutu onodu ogwugwu. Otú ọ dị, ị na-eri nri na iji ya eme ihe, na-emegide ihe ndị ị na-eme, ọ bụ nanị nsogbu ahụike gị.
Ihe niile gbasara otu esi eme griin ha maka na-eto eto dị iche iche n'afọ niile
Nuances nke ozuzu cyclamen site na nkerisi tuber
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Bara uru ma na-agwọ ọrịa Njirimara nke ugu